Izindandatho zeSaturn: izici, ukubaluleka nokutholwa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ISaturn ingelinye lamaplanethi angaphansi kohlelo lwelanga futhi iphakathi kweqembu lamaplanethi anegesi. Kugqame ukuba nezindandatho futhi kungelinye lamaplanethi amabili amakhulu futhi adume kakhulu ohlelweni lwethu lwonozungezilanga. Ingabukwa kalula kusuka phansi ngenxa ye Amasongo kaSaturn.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngamasongo kaSaturn, ukuthi akhiwa kanjani nokuthi yiziphi izici zawo.
1 Iplanethi enezindandatho
4 Ukuhlola izindandatho zikaSaturn
ISaturn yiplanethi ekhethekile. Kososayensi, kubhekwa njengelinye lamaplanethi athakazelisa kakhulu ukuqonda lonke uhlelo lwelanga. Kuyaphawuleka ukuthi inesisindo esiphansi kakhulu kunamanzi futhi yakhiwe ngokuphelele nge-hydrogen, nenani elincane le-helium ne-methane.
Kungokwesigaba samaplanethi amakhulu kagesi futhi inombala owehlukile okwenza ukuthi ihluke. Iphuzi kancane, lapho kuhlanganiswa khona imichilo emincane yeminye imibala. Abantu abaningi bayiphutha ngeJupiter, kepha abanabo ubudlelwano. Bahlukaniswa ngokusobala yiringi. Ososayensi bacabanga ukuthi amasongo abo enziwe ngamanzi, kepha aqinile njengama-icebergs, icebergs, noma amanye amaqhwa eqhwa, ikakhulukazi ngokuhlanganiswa nezinhlobo ezithile zothuli lwamakhemikhali.
Phakathi kwazo zonke lezi zici ezithakazelisayo ezenza iSaturn ibe yiplanethi ethokozisayo, kufanele futhi sigqamise nezinyanga eziyibumbayo. Kuze kube manje, iziphuphutheki eziyi-18 sezibonwe futhi zaqanjwa ngochwepheshe bamafiziksi kulo mkhakha. Lokhu kunikeza iplanethi ukubaluleka okukhulu nokuguquguquka kwezinto. Ukuziqonda kangcono, sizoklelisa ezinye zazo.
Okudume kakhulu yilokho okubizwa ngokuthi I-Hyperion ne-Iapetus, akhiwe ngokuphelele ngamanzi ngaphakathi, kepha aqinile kangangokuba kucatshangwa ukuthi ngokulandelana, afriziwe noma abe khona ngendlela yeqhwa. ISaturn ineziphuphutheki zangaphakathi nezangaphandle. Phakathi kwezakhiwo zangaphakathi, okubaluleke kakhulu ukwakheka kwangaphakathi lapho kutholakala khona imizila ebizwa ngeTitans. Ingenye yezinyanga ezinkulu kakhulu zeSaturn, yize izungezwe inkungu ewolintshi eminyene, akulula ukuyibona.
ISaturn ineziphuphutheki zangaphakathi nezangaphandle. Phakathi kwezakhiwo zangaphakathi, okubaluleke kakhulu ukwakheka kwangaphakathi lapho kutholakala khona imizila ebizwa ngeTitans. Ingenye yezinyanga ezinkulu kakhulu zeSaturn, yize izungezwe inkungu ewolintshi eminyene, akulula ukuyibona. Isathelayithi i-Titan ingenye yeziphuphutheki ngokuyisisekelo ezenziwe cishe yi-nitrogen ngokuphelele.
Ingaphakathi lale satellite lenziwe ngamatshe akhiwe ngamakhemikhali afana ne-carbon hydroxide ne-methane, afana namaplanethi ajwayelekile. Ubuningi buvame ukufana, ikakhulukazi bazothi, noma ngabe usayizi uyefana.
Uhlelo lwendandatho kaSaturn ngokuyinhloko lwakhiwe ngamanzi aneqhwa namatshe awayo osayizi abahlukahlukene. Bahlukaniswe ngamaqembu amabili, bahlukaniswe yi "Cassini Division": indandatho A (yangaphandle) nendandatho B (ngaphakathi), ngokusondela kwabo ebusweni beplanethi.
Igama lalesi sigaba livela kumtholi walo, uGiovanni Cassini, isazi sezinkanyezi saseFrance-isiNtaliyane esathola ukuhlukaniswa kwamakhilomitha angama-4.800 ububanzi ngo-1675. Iqembu B liqukethe izindandatho ezingamakhulu, ezinye zazo zinobunjwa be-elliptical obonisa izinguquko kumandla egagasi ngenxa yokuhlangana kwamandla adonsela phansi phakathi kwamasongo nesathelayithi.
Ngaphezu kwalokho, kukhona ezinye izakhiwo ezimnyama ezibizwa ngokuthi "ama-radial wedges" ajikeleza iplanethi ngejubane elihlukile kunaleyo yonke indandatho (ukunyakaza kwabo kulawulwa amandla kazibuthe womhlaba).
Imvelaphi yama-radial wedges ayisaziwa futhi ingavela futhi inyamalale ngokwezibalo. Ngokuya ngemininingwane eyatholwa ngumkhumbi-mkhathi waseCassini ngo-2005, kunomoya ozungeze indandatho, owakhiwe ikakhulu yi-oxygen yamangqamuzana. Kuze kube ngu-2015, imibono yokuthi amasongo kaSaturn akhiqizwa kanjani ayikwazanga ukuchaza ubukhona bezinhlayiya zeqhwa ezincane.
Usosayensi uRobin Canup washicilela umbono wakhe wokuthi ngesikhathi sokuzalwa kwesimiso sonozungezilanga, isathelayithi yeSaturn (eyakhiwa yiqhwa nomgogodla wedwala) yacwila emhlabeni yabangela ukushayisana. Ngenxa yalokhu, izingcezu ezinkulu zakhishwa zakha i-halo noma indandatho yezinhlayiya ezahlukahlukene, ezaqhubeka nokushayisana njengoba zazikulayini wokujikeleza kweplanethi, zaze zaveza izindandatho ezinkulu ezaziwa namuhla.
Ukuhlola izindandatho zikaSaturn
Ngo-1850, isazi sezinkanyezi u-Edouard Roche wafunda ithonya lamandla eplanethi kumasathelayithi akhe futhi wabala ukuthi noma yiluphi udaba olutholakala ngaphansi kwezikhathi ezingama-2,44 ububanzi beplanethi abukwazanga ukuhlangana bube yinto futhi uma seluyinto vele, luyohlukana phakathi. Iringi yangaphakathi kaSaturn C ingu-1,28 izikhathi eziphindwe ngeradiyo kanti iringi engaphandle A ingu-2,27 izikhathi eziphindwe kaningi. Zombili zingaphakathi kwemingcele kaRoche, kepha imvelaphi yazo isazonqunywa. Ngezinto eziqukethe, umkhakha ofana nosayizi wenyanga ungakhiwa.
Isakhiwo esihle seringi ekuqaleni sasibangelwa amandla adonsela phansi esathelayithi eseduze namandla amakhulu we-centrifugal akhiqizwa ukujikeleza kwe-Saturn. Kodwa-ke, uphenyo lweVoyager lwathola izakhiwo ezimnyama ezazingachazwa ngale ndlela. Lezi zakhiwo zijikeleza eringini ngejubane elifanayo ne-magnetosphere yomhlaba, ngakho-ke zingakwazi ukuxhumana namandla ayo kazibuthe.
Izinhlayiya ezakha izindandatho zikaSaturn ziyahlukahluka ngosayizi, kusuka ezicucwini ezincane kuya kwezingcezu ezinkulu, ezifana nezindlu. Ngokuhamba kwesikhathi, bazoqoqa izinsalela zezinkanyezi ezinomsila nama-asteroid. Izinto eziningi ezizibumbayo yiqhwa. Uma zindala kakhulu, zizoba mnyama ngenxa yokuqongelelwa kothuli. Iqiniso lokuthi bayakhanya likhombisa ukuthi basebancane.
Ngo 2006, umkhumbi-mkhathi waseCassini uthole indandatho entsha ngenkathi uhamba ethunzini likaSaturn kolunye uhlangothi lwelanga. Ukufihlwa kwelanga kwenza kube lula ukuthola izinhlayiya ezingabonakali kahle. Iringi phakathi kuka-F no-G iqondana nemizila kaJanus no-Epimetheus, futhi lawa masathelayithi amabili acishe abelane ngemizila yawo futhi ayishintshe njalo. Mhlawumbe ama-meteor ashayisanayo nalezi ziphuphutheki azokhiqiza izinhlayiya ezakha izindandatho.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngamasongo kaSaturn nezici zawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Amasongo kaSaturn
Ngigcwele injabulo nolwazi olusha ngalesi sihloko esifanelekayo sendawo yethu engenamkhawulo, ngethemba ukuthi uzoqhubeka nokusicebisa ngolwazi oluwusizo kangaka.